ရခုိင္ျပည္နယ္ | The Supreme Court of the Union
The Supreme Court of the Union
FORMATION OF COURTS
High Courts of the Region/ State
Courts of the Self-Administered Division / Zone
The Other Courts constituted by law
Adjudicate as to the Laws Adjudicate Fairly and Speedily Act as to the Procedure Maintain the Integrity and Reputation of the Court
« Back to galleryItem 28 of 57« Previous | Next »
Signing the Memorandum of Guidance as to Enforcement of Money Judgments between the Supreme Court of the Union, the Republic of the Union of Myanmar and the Supreme Court of the Republic of Singapore
Nay Pyi Taw, Feb 17
The Signing Ceremony of the Memorandum of Guidance (MoG) as to Enforcement of Money Judgments
Chief Justice of the Union receives the Secretary General of HCCH Dr. Christophe Bernasconi and his team
Nay Pyi Taw, September 12
The Chief Justice of the Union , U Htun Htun Oo receivedacourtesy call from Dr. Christophe Bernasconi, the Secretary General of the Hague Conference on Private International Law (HCCH) and his team at the Guest Hall
Signing the Minutes of Meeting of 6th JCC Meeting between the Supreme Court of the Union and the JICA
Nay Pyi Taw July 10
The Signing Ceremony of the Minutes of Meeting of the 6th Joint Coordinating Meeting on the Project for Capacity Development of Legal, Judicial and Relevant Sectors in
2 nd Workshop on Training for Mediators
Nay Pyi Taw 16 th May
The opening ceremony of 2nd Workshop on Training for Mediations, organized by the Supreme Court of the Union in collaboration with Japan International Cooperational Agency (JICA), was held today at 9:30
Issuance of the Union Supreme Court: The Performance to improve Investment and Doing Business in Myanmar
Naypyitaw April 11
The Supreme Court of the Union today issues the legal and judicial reforms to improve Investment and Doing Business in Myanmar.
Pyidaungsu Font Download Here
နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထတစ်နှစ်တာကာလ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှု မှတ်တမ်းဗီဒီယို
တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးပညာပေး ဇာတ်လမ်းတို
Judicial Journal Vol(3) No(3)
Judicial Journal Vol(3) No(2)
2018 Myanmar Law Report
2017 Myanmar Law Report
2016 Myanmar Law Report
2015 Myanmar Law Report
2014 Myanmar Law Report
2013 Myanmar Law Report
2012 Myanmar Law Report
1950 Myanmar Law Report
1949 Myanmar Law Report
1948 Myanmar Law Report
Announcements of Region or State High Courts
Kachin State High Court
Judgement Order Date
Kayah State High Court
Kayin State High Court
Chin State High Court
Sagaing Region High Court
Tanintharyi Region High Court
Bago Region High Court
Magway Region High Court
Mandalay Region High Court
Mon State High Court
Rakhine State High Court
Shan State High Court
Yangon Region High Court
Ayeyarwady Region High Court
တရားစီရင်ထုံးအကြောင်းအရာရှာဖွေခြင်း (Ruling Content Management System)စနစ် Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Online လွှင့်တင်နိုင်ရန် ‌ဆောင်ရွက်ခြင်း တင်ဒါအမှတ်စဉ် ( 11-IT/ 19-20) (Lot 3) ရေးသားခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းတို့အား ကြေညာခြင်း(၁၉-၃-၂၀၂၀)
ရုံးသုံးပရိဘောဂနှင့်စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၇-၂-၂၀၂၀)
တရားစီရင်ထုံးအကြောင်းအရာရှာ‌ဖွေခြင်းစနစ် Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် Online လွှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၃-၁-၂၀၂၀)
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ Mini Data Center အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)
Case Management System (CMS) Upgrade ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)
Dell PowerEdge R740 Rack Mount Server ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)
Copier A3 (Black & White) နှင့် Color Copier A3 များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၃၀-၁၂-၂၀၁၉)
Computer နှင့် Printer များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၇-၁-၂၀၂၀)
ပြည်ထောင်စုဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အကူပေး‌ရေးအဖွဲ့ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ‌‌‌‌‌ခေါ်ယူခြင်း
တရားစီရင်ထုံးအကြောင်းအရာရှာဖွေခြင်း (Ruling Content Management System)စနစ်ရေးသားခြင်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်နှင့် ရွေးချယ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းတို့အား ကြေညာခြင်း(၉-၄-၂၀၁၉)
ဇေယျာသီရိမြို့နယ်တရားရုံးမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် မြေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း
တရားစီရင်ထုံးအကြောင်းအရာများ ရှာဖွေခြင်း (Content Search Engine)စနစ်ရေးသားခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၂၈-၁-၂၀၁၉)
Computer ၊ Copier နှင့် Printer များ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁-၂-၂၀၁၉)
အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၁၀-၁၂-၂၀၁၈)
Video Wall9Units3x3Display များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (၃-၁၂-၂၀၁၈)
Case Study Book on International Transaction
The Union Judiciary Law
Judiciary Strategic Plan
YEAR2ACTION PLAN (2019)
YEAR3ACTION PLAN (2020)
Code of Judicial Ethics for Myanmar Judges
LEGISLATION & DIRECTIVES
Website: www.unionsupremecourt.gov.mm, E-mail: scunion@mptmail.net.mm
Copyright © 2017. The Supreme Court of the Union. All rights reserved.